TOP NEWS: AMISOM oo si cad u sheegtay Dadkii ay ku Xasuuqday Dagmada Qoryooley in Heshiis ay horay ula galeen ay ka baxeen – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: AMISOM oo si cad u sheegtay Dadkii ay ku Xasuuqday Dagmada Qoryooley in Heshiis ay horay ula galeen ay ka baxeen
by Tifaftiraha K24 20th December 2016 057
Howlgalka midowga Africa AMISOM’ ayaa walaac ka muujinaya wararka warbaahinta qaar ay warinayso oo ah in ciidamada AMISOM ay ka dambeeyeen dilka dad rayid ah oo ka dhacay magaalooyinka Qoryooley iyo Marka ee gobalka Sh/hoose todobaadkan.
War ka soo baxay AMISOM ayaa lagu sheegay in ay heleen warar hor dhac ah oo sheegaya in 17-bishan December, xili habeen ah in ciidamada AMISOM weerar hoobiyayaal ah lagu qaaday kuna qaadeen argagixiso looga shakisan yahay Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanaya deegannaada sida lagu ku xusay bayaanka.
Tani waxa ay dhacday kadib markii ay ciidamada oo roondo ku jiray ka war heleen dhaq-dhaqaaqa gaadiid xili habeen ah socday kaasoo ula muuqday in uu siday dagaalyahano Al-shabaab ka tirsan.
Waxaana jiray heshiis u dhaxeeya maamulka deegaanka iyo AMISOM oo reebaya ama mamnuucaya isku socodka gaadiidka xiliga habeenkii si loo yareeyo weerarada argagixiso ee dhaca, sababana dhimashada dad rayida.
Warka ayaa intaa ku daraya in dhaq-dhaqaaqa gaadiidka uu ku kalifay AMISOM in ay dhigato barkoontrol oo ay uga hortagayaan weerarada uga yimaada Al-Shabaab.
Gaari nooca Homeyda ah ayaa ku soo dhawaaday kontarool waxaana lagu amray in uu istaago balse darawalka ayaa ka dhaga adeegay, ciidamada durbadiiba waa ay toogteen, waxaana halkaas ku dhintay 6 ruux oo gaarigaas saarnayd ayaa lagu yiri warka ka soo baxay AMISOM.
AMISOM sidoo kale waxaa ay sheegtay in uu jiray weerar kale oo isna ka dhacay deegaanka Buufow kaasi oo kolonyo ciidammaooda ah oo ku soo jeeday magaalada Muqdisho ay Al-shabaab weerar gaadmo ah oo walxaha qarxa ah la beegsadeen balse aan wax khasaare dad rayida ka dhalan.
“AMISOM waxaa ay ku shaqaysaa sharciyada caalamiga ah ee xuquuqul aadanaha, waxaana ay qaadanaysaa khasaaraha dadka rayidka ah ee ciidammadooda geystaan, AMISOM iyo dawlada Federalka Soomaliya ayaa bilaabay baritaanka labadaas dhacdo, waxaana ay qaadayaan talaabo sax ah marka uu soo dhamaado baaritaankaas” ayaa lagu yiri bayaanka.
Waa weerarkii labaad ee Ciidanka midowga Africa Amisom ay ka gaystaan Gobolka Shabelaha Hoose. horaantii sannadka gaari dad rayid ah ay saarnaayeen waxa ay ku dileen uga yaraan afar ruux meel u dhaw magaalada Bula-mareer
waxaa sidoo kale gaadiidkooda uu ku jiiray haweenay magaalada Muqdisho isbuuci hore. Waxaana xusid mudan in AMISOM ay cudur daar iyo raali gelin ka bixisay qasaarahaasi dadka rayidka ah oo ay ku tilmaantay dhacdooyin.
Daawo: Madaxweyne Xasan Shiikh oo Madaxtooyada Muqdisho ku qaabilay Ilhaan Cumar oo ah Gabadhii ugu horeysay ee….
Daawo Sawirrada: Madaxweynaha iyo Xubno Wasiiro ah oo Maanta ka qeyb galay Xuska 73 guurada kasoo wareegatay Aas aaska Ciidanka Booliska Soomaliyeed+Sawirro
Top News: Masuuliyiin Jubbaland Iyo Maamulka Gobalka Gedo Ka Tirsan Oo Bohol Garas Arintan U Tagay (Tolow Maxay Arintaasi Tahay???)
Wafdigii Xildhibaanadda ahaa ee ka socday Dalka Jabuuti kuna sugnaay Muqdisho oo Maanta…..+Sawirro
Akhriso: Laba hey’addood oo u dooda xuquuqda aadanaha oo war culus ka soo saartay xirnaasha xadka u dhaxeeya kenya iyo somalia